eTurboNews waxay taagan tahay gadaasha Xorriyadda Saxaafadda iyo QALINKA Belarus
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Belarus Jebinta Wararka » eTurboNews waxay taagan tahay gadaasha Xorriyadda Saxaafadda iyo QALINKA Belarus
Belarus Jebinta Wararka • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
39 min akhris
Maamulaha PEN America Suzanne Nossel ayaa tiri kuwan soo socda :: Marka dowladdu aamusto oo ay cagta mariso qorayaasheeda, waxay muujineysaa heer ceeb iyo qudhun ah oo ay hogaamiyayaashu higsanayaan inay qariyaan, laakiin taa badalkeeda ay banaanka soo dhigaan. Hogaamiyaasha Belarus waxay u maleyn karaan inay caburin karaan runta iyagoo aamusinaya kuwa ku dhiiranaya inay sheegaan, laakiin sheekada rabitaanka dadka iyo baaxada cabudhinta arxan darada ah waxay aduunka uheli doontaa. Waxaan garab istaageynaa qorayaasha PEN Belarus waxaana naga go'an inaan hubino in codkooda muhiimka ah la maqlo iyo xuquuqdooda ay ku muujinayaan in la cadeeyo.
eTurboNews sida daabacaad madax bannaan oo taagan gadaasha PEN America walaasheed Organization PEN Belarus.
Wasaaradda Caddaaladda Belarusiyaanka ayaa u dhaqaaqday inay xirto ururka walaalka ah ee PEN America ee PEN Belarus. Waxay ku soo beegmaysaa xilli toddobaadkan ay socdeen hawlgallo lagu qaaday xafiisyada ururada iyo xarumaha warbaahinta.
PEN Belarus waxay heshay ogaysiis ah ujeedka wasaarada ee ah in la baabi'iyo ururka isla maalinta kooxda sii daayay warbixin oo muujinaya kororka xadgudubyada xuquuqda dhaqanka ee dalka.
QALINKA Ameerika waxay taagan tahay isgoyska suugaanta iyo xuquuqda aadanaha si loo ilaaliyo ra'yi dhiibashada ee Mareykanka iyo adduunka oo dhan. Waxaan u ololeynaynaa xorriyadda wax qorista, annaga oo aqoonsanna awoodda erayga ee adduunka u beddelaysa. Hadafkeenu waa inaan mideyno qorayaasha iyo xulafadooda si loogu dabaaldego muujinta hal-abuurka ah loona difaaco xorriyadaha suurtogelinaya
eTurboNews waa xubin ka tirsan PEN America.
Warqadda loo diray PEN Belarus bishii Luulyo 22 waxay u dhigantaa:
Maxkamadda Sare ee Jamhuuriyadda Belarus waxay bilowday dacwad madani ah oo ku saabsan sheegashada Wasaaradda Caddaaladda ee Jamhuuriyadda Belarus ee ka dhanka ah Jamhuuriyadda Dadweynaha Jamhuuriyadda 'Belarusian PEN Center' si loo tirtiro.
Wakiilka Jamciyadda Dadweynaha ee 'Belarusian PEN Center' waa inuu yimaadaa waqtiga loo cayimay isagoo wata dukumiintiyo xaqiijinaya rukhsadda ka-qaybgalka kiiska.
Waxa ugu murugada badan ayaa ah in aanan arkin wax dhamaad ah. Waxaa jira wadarta nadiifinta adduunka Belarusiyaanka. Waxay wax ugu dumiyaan si waafaqsan shaydaan sheydaan.
Xarunta Belarusiya PEN waxay si nidaamsan u uruurisaa macluumaadka ku saabsan hirgelinta xuquuqda dhaqanka iyo xuquuqda aadanaha marka loo eego shaqaalaha dhaqanka.
Laga soo bilaabo Ogosto 2020 illaa maanta, waxaan markhaati iyo dokumentiyo ka nahay culeysyo sare oo la diyaariyey oo la saaray dhammaan bulshada xorta ah iyo dadka dhaqanka gaarka ah gaar ahaan. Xilligan waa xilli masiibo badan oo loo soo maray xorriyadda hadalka, xorriyadda hal-abuurka, xorriyadda ra'yiga, iwm. Xiisadda dhaqan-bulsheed waxaa lagu gartaa ku tumashada xuquuqda iyo xorriyaadka aasaasiga ah ee dadka, cadaadis loo muujiyo dadka ka soo horjeeda, faaf-reebka, jawiga cabsida, iyo cayrinta taageerayaasha isbedelka.
Dukumintigaani wuxuu kakooban yahay tirakoob iyo tusaalooyin ku saleysan uruurinta iyo isku-dhafka macluumaadka laga helo ilo furan, waraaqo iyo wadahadal shaqsiyeed oo lala yeesho dad dhaqameedyo ah laga bilaabo Janaayo ilaa Juun 2021.
Intii lagu jiray qeybtii hore ee 2021, waxaan xusnay 621 kiis oo xadgudubyo xuquuqda aadanaha iyo dhaqanka ah.
Tirada xadgudubyada ee dhacay Janaayo-Juun 2021 waxay ka badan yihiin mugga kiisaska la duubay sanadka oo dhan ee 2020 (593) (Waxaan si gaar ah uga hadlaynaa kiisaska sannadka 2020, ee lagu soo daray kormeerka kormeerka inta lagu jiro sanadkaas. Intii aan ururinay xogta kiisaska sanadka 2021, waxaan sidoo kale sii wadeynaa duubista kiisaska la seegay laga soo bilaabo 2020. Waxay ka dhigan tahay inay badan yihiin.). Waxaa lagu doodi karaa in cadaadiska iyo cadaadiska, oo si gaar ah u xooganaa tan iyo bishii Ogosto 2020, oo bilaabmay xilliyadii ololaha madaxweynenimada, aysan daciifin, taa bedelkeed cadaadisyada ayaa helaya qaabab cusub waxayna saameyn ku yeelanayaan maadooyinka dhaqanka Belarusiyaanka ah ee waligood sii ballaaranaya. .
Dhaqdhaqaaqa xadgudubyada la duubay tan iyo 2020:
Laga bilaabo Juun 30, 2021, 526 dadka waxaa loo aqoonsaday inay yihiin maxaabiis siyaasadeed Belarus. Tirada guud ee maxaabiista siyaasadeed, 39 waa shaqaale dhaqameed.
Iyaga ka mid ah:
Paviel Sieviaryniec, qoraa iyo siyaasi - 25.05.2021 lagu xukumay 7 sano oo kujira gumeysi amni oo ugu badan;
Maksim Znak, garyaqaan, abwaan iyo qoraa - ayaa ku jiray a xarunta lagu hayo tan iyo 18.09.2020;
Viktar Babaryka, ilaaliyaha fanka - 06.07.2021 (Weedhaha aan ku ogeyn habka qoritaanka qoraalka) lagu xukumay 14 sano oo kujiray gumeysi ciqaab amni oo ugu badnaan ah;
Ihnat Sidorčyk, abwaan iyo agaasime - 16.02.2021 lagu xukumay 3 sano oo ah "khimiya" (Si wada jir ah, mid ka mid ah noocyada ciqaabta waxaa loo yaqaan "khimiya", oo macnaheedu yahay xaddidaadda xorriyadda iyadoo loo gudbinayo xarun dhaqan-celin nooc furan ah);
Miokola Dziadok, u dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa fowdada, qoraaga suugaanta xabsiga - wuxuu ku jiray a xarunta lagu hayo tan iyo 11.11.2020;
Julija Čarniaŭskaja, qoraa iyo saynisyahano dhaqameed - ilaa iyo 20.05.2021 way ku hoos jirtay qabashada guriga (iyada oo aan suurtagal ahayn in la baxo ama wax xiriir ah lala yeesho dunida dibaddeeda, marka laga reebo qareenkeeda);
Kaciaryna Andrejeva (Bachvalava), qoraa iyo wariye - 18.02.2021 lagu xukumay 2 sano gumeysi ciqaab ah;
Andrej Pačobut, gabayaa iyo xubin ka tirsan "Midowga Poles" - wuxuu ku jiray a xarunta lagu hayo tan iyo 27.03.2021;
Andrej Alaksandraŭ, gabayaa, suxufiga iyo maareeyaha warbaahinta - ayaa ku jiray a xarunta lagu hayo tan iyo 12.01.2021;
Maryja Kaleśnikava, muusikiiste iyo maareeyaha mashaariicda dhaqanka - ayaa ku jiray a xarunta lagu hayo tan iyo 12.09.2020;
Ihar Bancar, muusikiiste - 19.03.2021 lagu xukumay 1.5 sano oo ah "khimiya";
Aleksey Sanchuk, durbaan garaac - 13.05.2021 lagu xukumay 6 sano oo kujiray gumeysi ciqaab amni oo ugu badnaan ah;
Anatol Khinevich, bard– 24.12.2020 lagu xukumay 2.5 sano gumeysi ciqaab ah;
Alaksandr Vasilevič, Maareeyaha mashaariicda dhaqanka iyo ganacsade - wuxuu ku sugnaa a xarunta lagu hayo tan iyo 28.08.2020;
Eduard Babaryka, maareeyaha dhaqanka - wuxuu ku jiray a xarunta lagu hayo tan iyo 18.06.2020;
Ivan Kaniavieha, agaasimaha wakaaladda riwaayadaha - 04.02.2021 lagu xukumay 3 sano gumeysi ciqaab ah;
- Mia Mitkevich, maareeyaha dhaqanka - 12.05.2021 lagu xukumay 3 sano gumeysi ciqaab ah;
- Liavon Khalatran, maareeyaha dhaqanka - 19.02.2021 lagu xukumay 2 sano oo ah "khimiya";
Andżelika Borys, gudoomiyaha "Midowga Poles-ka Belarus" - waxay ku jirtay a xarunta lagu hayo tan iyo 23.03.2021;
Ala Sharko, cilmibaaraha farshaxanka- wuxuu kujiray a xarunta lagu hayo tan iyo 22.12.2020;
Ales Pushkin, farshaxan - ayaa ku jiray a xarunta lagu hayo tan iyo 30.03.2021;
Siarhei Volkau, jilaa - 06.07.2021 lagu xukumay 4 sano oo kujiray gumeysi ciqaab amni oo ugu badnaan ah;
Danila Hancharou, Naqshadeeyaha nalalka - 09.07.2021 lagu xukumay 2 sano gumeysi ciqaab ah;
Aliaksandr Nurdzinau, farshaxan - 05.02.2021 lagu xukumay 4 sano oo kujiray gumeysi ciqaab amni oo ugu badnaan ah;
Uladzislau Makavetski, farshaxan - 16.12.2020 lagu xukumay 2 sano gumeysi ciqaab ah;
Farshaxanka Takarchuk, naqshadaha - 20.11.2020 lagu xukumay 3.5 sano gumeysi ciqaab ah;
Rastislau Stefanovich, naqshadeeye iyo naqshadeeye - ayaa ku jiray a xarunta lagu hayo tan iyo 29.09.2020;
Maksim Taccianok, naqshadeeye - 26.02.2021 lagu xukumay 3 sano oo ah "khimiya";
Piotr Slutski, sawir qaade iyo injineer codka - wuxuu kujiray a xarunta lagu hayo tan iyo 22.12.2020;
Pavel Spiryn, qoraa-qoraa iyo baloog - 05.02.2021 ayaa lagu xukumay 4.5 sano gumeysi ciqaab ah;
Dzmitry Kubarau, Naqshadeeye UX / UI - 24.03.2021 lagu xukumay 7 sano oo kujiray gumeysi ciqaab amni oo ugu badnaan ah;
- Ksenia Syramalot, gabayaa iyo faafiye, ardayga Kulliyadda Falsafadda iyo Cilmiga Bulshada ee Jaamacadda Belarusiya - 16.07.2021 ayaa lagu xukumay 2.5 sano gumeysi ciqaab ah;
Yana Arabeika iyo Kasia Budzko, Ardayda Kulliyadda Waxbarashada Qurxinta ee Jaamacadda Belarusiya ee Pedagogic University - 16.07.2021 ayaa lagu xukumay 2.5 sano gumeysi ciqaab ah;
Maryia Kalenik, ardayga Kulliyadaha Naqshadeynta Bandhigga ee Akadeemiyada Fanka - 16.07.2021 lagu xukumay 2.5 sano gumeysi ciqaab ah;
Viktoryia Hrankouskaya, ardaygii hore ee Kulliyadda Dhismaha ee Jaamacadda Farsamada Belarusiya - 16.07.2021 ayaa lagu xukumay 2.5 sano gumeysi ciqaab ah;
Ihar Yarmolau iyo Mikalai Saseu, qoob ka ciyaarka - 10.06.2021 lagu xukumay 5 sano oo kujiray gumeysi ciqaab amni oo ugu badnaan ah;
Anastasiya Mirontsava, farshaxan, laga eryay tan iyo sanadkii hore, ardayga Akadeemiyada Fanka - 01.04.2021 ayaa lagu xukumay 2 sano gumeysi ciqaab ah.
Si ku meel gaar ah, maareeyaha dhaqanka Dzianis Chykaliou wuxuu leeyahay xaalad "hore" maxbuus siyaasadeed, maadaama xilligan uu xor ka yahay aqoonsiga inuusan ka bixin dalka. Laakiin iyadoo la raacayo xukunka, waxaa lagu qasbi doonaa inuu aado xarun dhaqancelineed oo nooca furan ah (oo loogu talagalay "khimiya": waxaa lagu xukumay 3 sano).
Qeybtii hore ee 2021, 24 shaqaalaha dhaqanka ee la maxkamadeeyay ayaa ahaa sharci darro lagu xukumay. Kuwaas waxaa ka mid ah kuwa loo aqoonsaday in ay yihiin maxaabiis siyaasadeed iyo kuwa aan haysan maqaamkan. 13 shaqaale dhaqameed ayay maxkamadu ku xukuntay a gumeysi ciqaabeed xukun 2 ilaa 8 sano ah (7 waxaa lagu xukumay gumeysi amni oo sarreeya), 9 shaqaale dhaqameed - ayaa lagu xukumay 1.5-3 sano oo ah "khimiya", 2 shaqaale dhaqameed- lagu xukumay 1-2 sano oo "xabsi guri ah" (xaddidaadda xorriyadda iyada oo aan loo dirin xarun dhaqancelin oo furan).
Astaamaha "muuqaalka" ee qeybtii labaad ee sanadka ayaa ah in shaqaalaha dhaqanka ee lagu xukumay "khimiya" oo markii dambena lagu sii daayay guryahooda in yar ka dib markii lagu dhawaaqay xukunka, waxay bilaabeen inay helaan tixraacyo bishii Juun si ay ugu adeegaan xukunadooda xarumahooda furan. . Marka, bishii Juun, maareeyaha dhaqanka Liavon Khalatran, abwaan iyo agaasime Ihnat Sidorchyk, muusikiiste Ihar Bancar iyo naqshadeeye Maksim Taccianok ayaa loo diray "khimiya". Rafcaanada maxkamada ee xukunada sharci darada ah uma aysan horseedin isbedel cabirka xakamaynta.
Baaxadda cilmi-baaristayada waxaan sidoo kale diiradda saarnay xaaladaha xirnaanshaha hay'adaha xiran. Muddadii u dhaxaysay Jannaayo-Juun 2021, waxaannu soo ogaannay 44 xaaladood oo leh sharraxaad ama sheegis xaaladaha ay maxaabiistu kala kulmaan xabsiyada. Sharaxaadyadani waxay ku kooban yihiin macluumaadka aan ka heli karno warbaahinta iyo daabacaadda qaraabada. Waxaan fahamsanahay in ilaha macluumaadka ee xaddidan, waraaqaha adag iyo inta badan ee maqnaanshaha ee maxaabiista, iyo qaab-dhismeedka adag ee faaf-reebka xabsigu uusan noo oggolaanaynin inaan ku dhawaaqno dhammaystirka macluumaadka; si kastaba ha noqotee, xitaa iyadoo lagu saleynayo xaqiiqooyinka jira, waxaan ku doodi karnaa in shuruudaha haynta ay ka dhigan tahay, ugu yaraan, loola dhaqmo naxariis darro iyo sharaf dhac, mararka qaarkoodna waxaa ka muuqda calaamado jirdil.
Tusaalooyinka xaaladaha haynta:
Maxim Znak ayaa gudbiyay taas mugdi muu arkin 9 bilood. Nalalka ayaa si joogto ah ugu jira qolkiisa.
Intii lagu guda jiray dhageysiga maxkamadda 26-kii Abriil, Zmitser Dashkevich ayaa yiri Shuruudo is barbar socda ayaa loo abuuray maxaabiista siyaasadeed: maxaabiista siyaasadeed waa la toosiyaa waqtiyo ka duwan maxaabiista kale ,, waxaa jira baaritaano habeenkii ah, joodariyaal la'aan, dabeecad xumo iyo xirmo la'aan. ”
Qol loogu talagalay 4 qof ayaa lagu qabtay 12 qof. Valery wuxuu qaatay 20 maalmood furaash iyo buste la'aan. 2 maalmood oo xiriir ah, maxaabiista siyaasadeed waxaa lagu qasbay inay dhageystaan ​​tabinta Golaha Shacabka Belarusiya. Intii lagu jiray 20 maalmood ee la xiray, Valery waligiis lama qubeysan oo waligiis kama helin baakado qoyskiisa.
Nooca jirdil ee gaarka ah waa raadiyaha, kaas oo shaqeeya saacad walba mararka qaarna habeenkii.
Xaaska Andrzej Poczobut ayaa sheegtay in maamulka xarunta xabsiyada kahor aysan ninkeeda siinaynin dawooyinka wadnaha. Andrei wuxuu leeyahay wadno garaac aan caadi ahayn. Daawada ayaa loo qaaday xarunta lagu hayo ee Zhodino laakiin maamulka ayaan si toos ah u siinin Poczobut.
“Ma helayo caafimaad. Isagu waa jaalle. Mararka qaarkood wuxuu joojiyaa inuu huruud isu beddelo, caadi ayuu noqdaa, caddaan. Kadib cawl, ka dibna huruud markale. Indhihiisu had iyo jeer waxaa ka buuxa malax. Seedaha lugta ayaa kala jabay wuxuuna u baahan yahay qalliin haddii kale seedaha ayaa kala jeexan Buuxintiisii ​​ayaa dhacday, kuma qaban karo xabsiga. “
“Calaamadda huruudda ah ee magaceeda hore iyo kan dambeba. Waxaan rabaa inaan isla markiiba caddeeyo: maya, tani maahan calaamad gaar ah oo loogu talagalay kuwa siyaasadeed. Laakiin tani waa nooc ka mid ah kala soocida maxaabiista - taasi waa, maahan in maxaabiista oo dhami ay xirtaan astaamaha huruudda ah, laakiin kaliya cutub gaar ah oo loo diiwaangeliyey inuu yahay mid ka hortag u ah xagjirnimada "xagjirnimada". Sideedaba, kala soocida noocan oo kale ah ma ahan wax cusub - dhaqankani wuxuu jiray tan iyo ugu yaraan 2019 ”.
Hore waxaan u soo sheegnay xarig aan loo meel dayin, dacwad ciqaabid, xukun sharci daro ah iyo xaalado kale –waxaa liiska xuquuqaha had iyo jeer lagu xadgudbo ee la xiriira dadka dhaqanka iyo dadka ku dhaqma xuquuqdooda dhaqan. Maqalka (aragtiyada ka duwan kuwa ay sii daayaan saraakiisha dowladda) ayaa ah sababta ugu weyn ee dadka loo maxkamadeeyay.
Waxaan sidoo kale diiwaangelinnay kororka tirada shaqsiyaadka ka tagaya dalka si loo hubiyo nabadgelyada shaqsiyadeed, kiisaska takoorka luqadda, iyo xuquuqda isticmaalka alaabada dhaqanka.
Waa in fiiro gaar ah la siiyaa kordhinta mas'uuliyadaha maamul iyo dambiile ee adeegsiga astaamaha qaranka. Dhaqankani wuxuu ku kobcay waddanka oo dhan. Ilaa hada, calanka cad-casaan-cad iyo jaakadaha hubka "Pagonya" looma aqoonsan xagjirnimo, laakiin hadda dadka waxaa lagula xisaabtamayaa kaliya isticmaalka calanka laakiin sidoo kale kala duwanaanshaha isticmaalka midabka isku darka astaamaha taariikhiga ah. Adeegsiga astaamaha qaranku maaha diiradda ugu weyn ee cilmi-baaristayada, laakiin in ka badan 400 oo kiis oo dalka oo dhan ah ayaa lagu qabtay goobteenna aragtida oo keliya lix bilood.
Laga bilaabo bisha Janaayo ee sanadkan, guryaha madbacadaha aan dawliga ahayn, kuwa wax daabaca, buugaag qaybiyeyaasha, saxaafada madaxa banaan, oo ay ku jiraan kuwa ku jira mawduucyada dhaqamada, qorayaasha, iyo inta badan akhristayaasha laftooda, waxaa ku dhacay cadaadis. Sidaas,
Bishii Janaayo, daabacayaasha Hienadź Viniarski iyo Andrej Januškievič waa la xiray lana wareystay. Baadhitaanno ayaa lagu sameeyay guryaha daabacaadda "Januskevic" iyo "Knigosbor". Kumbuyuutarro, taleefanno iyo buugaag ayaa lala wareegay. Xisaabaadka labada daabacadood, iyo sidoo kale dukaanka buugaagta ee knihi.by, ayaa la xanibay oo sidaas ayey ku jireen 146 maalmood (ku dhowaad 5 bilood) illaa laga xayiray Juun 8.
Muddadan, ayaa howlaha guryaha daabicista waxay ahaayeen ku dhowaad curyaan, ururadiina laftooda waxaa loogu hanjabay xiritaanka: waxaa jiray khasaaro, dhibaatooyin la xiriira raadinta ilaha buugaag cusub, mana jirin fursad lagu bixiyo guryaha daabicista.
Guriga daabacaadda "Logvinov" sidoo kale waa hakad ku jiraa. Dukaanka buugaagta ayaa xiran oo wuxuu ku shaqeeyaa khadka tooska ah.
Waxaan si joogto ah u helnay warka sheegaya in caadooyinka Belarusiyadu aysan u oggolaan buugaag ay qoreen qoraayo gaar ah iyo / ama kuwa wax daabaca. Sidaa darteed, sheeko uu qoray Viktar Marcinovič "Revolution" (diraha - knihi.by) looma oggolaan dibadda. Buugga "Fikradda Qaranka Belarusiya" ee ay qortay Zmitser Lukashuk iyo Maksim Goryunov sidoo kale ma helin macaamiisha ajnebiga ah.
Buugga la daabacay ee "Dogs of Europe" ee uu qoray Alhierd Bacharevič, oo ka yimid Lithuania ilaa guriga daabacaadda ee Yanushkevich oo lagu daabacay 1000 nuqul, ayaa loo diray kormeerka kastamka iyo baaritaanka joogitaanka (maqnaanshaha) ee xagjirnimada. Gabagabada lama bixin 30 maalmood kalandar ka dib; maanta wareegga wareegga ayaa ku jiray xaqiijin muddo 3 bilood ah.
Buugga "Belarusian Donbass" waxaa qoray Kaciaryna Andrejeva (Bachvalava) iyo Ihar Iljaš ku dhawaaqay xagjir. Rafcaankii Ihar Iljaš ee ka dhanka ahaa aqoonsiga buuga oo loo aqoonsaday inuu yahay waxyaabo xagjir ah waa ladiiday - xaalku siduu yahay wali. Weriye Roman Vasyukovich, oo laba nuqul oo buugga ah ka soo dhoofiyay Jamhuuriyadda Belarus xitaa ka hor intaan lagu dhawaaqin inuu xag-jir yahay, ayaa la xukumay, natiijadiisana wuxuu ku ganaaxay 20 qaybood oo aasaasi ah (qiyaastii $ 220).
Waxaa lagu soo gabagabeeyey in buugga “Fikirka Qaranka Belarusiyaanka” waxaa ku jira "Calaamadaha muujinta xagjirnimada". Si kastaba ha ahaatee, ma jiro wax war ah oo ku saabsan maxkamadda xukuntay in buugga ay ku jiraan waxyaabo xag-jir ah oo hadda buuggu aanu ku jirin liiska rasmiga ah ee agabyada xag-jirka ah. Si kastaba ha noqotee, dacwad ayaa ka socota mid ka mid ah dadka deggan gobolka Minsk, Jahor Staravojtaŭ [Yegor Starovoitov], oo la isku dayay inuu haysto buuggan, oo laga soo iibsaday dukaanka buugaagta ee dawladda lana qabtay ka hor inta aan lagu helin "calaamadaha xag-jirnimada. ” Maxkamadeynta ka dhanka ah Jahor Staravojtaŭ waxaa loo joojiyay oo kaliya sababo la xiriira waqtiga uu ku egyahay in loo keeno mas'uuliyad maamul (2 bilood).
Kiis kale oo ciqaabta akhristayaasha ah wuxuu ahaa xarigga hawlgabyada "kaqeyb qaadashada ficil aan loo fasixin" - reading buugaag ay qoreen qorayaasha reer Belarusiya tareenka: Nil Hilevich, Yakub Kolas, Uladzimir Karatkievich iyo kuwa kale qorayaasha classic. Intii lagu guda jiray su'aalaha, sarkaalka booliiska wuxuu buugaagtan ugu yeeray suugaan mucaarad ah.
Waxaan duubnay in dhowr buug ay ahaayeen la diiday telefishanka qaranka. Kuwani waa buugaag uu qoray Uladzimir Arloŭ (” Imiony Svabody"), Alaksandar Lukašuk ("Dhacdooyinka ARA ee Belarus"), Uladzimir Nyaklyayew (" Kon "), Paviel Sieviaryniec (" National Idea "), Aleh Latyshonak (" Žaŭniery BNR ")," Kalinoŭski na Svabodzie "iyo" "Slounik Svabody" "oo ay daabacday Radio Svaboda, Magazine ARCHE iyo kuwo kale .
Shirkada “Belsoyuzpechat”Wuxuu si kali kali ah u joojiyay qandaraasyadii iibinta daabacaadda daabacan, oo ay ka mid ahaayeen saxaafad ay ku jirtay mowduuc ku saabsan mowduuca dhaqanka oo ay ka mid yihiin wargeyska" Novy Chas "iyo majaladda" Nasha Gistorya ". Isla markiiba ka dib, Belpochta ayaa sidoo kale joojiyay qandaraaska daabacaadan, diiwaangelintana lama bixinayo wixii ka dambeeyay Julaay 2021. Dukaamada buugaagta ee ay dawladu leedahay qaarkood ayaa sidoo kale ka quustay iibka.
Waxaa la ogyahay in maamulka “Belkniga”Buugaag ay qoreen dhowr qoraa ayaa laga saaray khaanadaha dukaankooda: Viktar Kaźko, Uladzimir Nyaklyayew, Marcinovič Viktar iyo kuwa kale. Shirkaddu waxay kaloo joojisay qandaraaskii soo saarista "Aragtiyada Suugaanta ee Qarnigii 20aad" (buug uu tafatiray Lyavon Barshchewski) ka hor jadwalka.
Wareegayaashu waxay bilaabeen inay yimaadaan maktabadaha iyagoo dalbanaya in laga saaro buugaagta guriga daabacaadda Harvest ku saabsan taariikhda militariga, gaar ahaan buugaagta by Viktar Lachar “Taariikhda Milatari ee Belarus. Geesiyaal. Calaamadaha. Midabada ”iyo“ Astaamaha Milatari ee Belarusiyaanka. Boorar iyo direys ”. Waxaa sidoo kale la ogyahay in buugaagta Alhierd Bacharevič laga saaray maktabadaha gobolka.
BARNAAMIJYADA FANKA IYO URURADA DHAQANKA
Ilaa bilowgii 2021, waxaan diiwaangelinnay isbeddel loogu talagalay in lagu abuuro caqabado howlaha dhaqdhaqaaqa goobaha madaxbannaan. Isbeddelkani ma socon oo keliya lixdii bilood ee la soo dhaafay laakiin sidoo kale wuxuu isu beddelay qaabab ba'an oo cadaadis ah oo ku saabsan ururadan. Cadaadisyadu waxay kubilaabmeen su'aalo waydiinta maamulayaasha, raadinta, qabashada dukumiintiyada iyo hantida, waxayna kusii socdeen qaab dib u eegisyo badan oo ay sameeyeen Waaxda Baarista Maaliyadeed, Kormeeraha Canshuuraha, cutubyada Wasaaradda Xaaladaha Degdegta ah, iwm. nooc ka mid ah cadaadiska maamulka - ka saarida ururada.
Bilowgii sanadka, milkiilaha dhismuhu wuxuu si keli kali ah u joojiyey heshiiski kirada ee lala galayey Xarunta Dhaqanka ee Ok16, taas oo ay ka dhasheen dhamaanba dhacdooyinkii (inta badan masraxa) la joojiyey Raadinta dambe waxaa lagu qabtay xarunta dhaqanka "Druhi Pavierch" [Dabaqa Labaad] iyo Space KH ("Kryly Chalopa"). Bishii Abriil, Wasaaradda Xaaladaha Degdegga ah iyo xarunta nadaafadda ayaa yimid goobta "Mestsa", taas oo keentay in goobta la xiro illaa laga saxo xadgudubyada.
Barta iyo farshaxanka Goobta Saddexaad (“Третье место”) ee Grodno iyo Red Pub waxay ahaayeen qasbay in la xidho. Naadiga Minsk ee muusikada Graffiti ("Граффити") ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay caqabado (naadigu wuu xirmay laakiin markii dambe wuxuu awooday inuu markale furmo). Bandhigii farshaxanka casriga ah ee Farshaxanka Farshaxanka ayaa la joojiyay waxaana gebi ahaanba la xiray fanka MAF.
Laga bilaabo Abriil, cadaadiska maamulka ayaa sii xoogeystay wuxuuna bilaabay inuu qaato qaab aad u xun badanoo. Marka, Abriil 19, Maxkamadda Dhaqaalaha ee gobolka Brest waxay go'aansatay inay tirtirto "Dugsiga Booland" LLC (“si loo ilaaliyo danaha gobolka iyo danta guud)”. 12-kii Maajo, Maxkamadda Dhaqaalaha ee Grodno waxay xukuntay in la tirtiro hay'adda dhaqanka iyo waxbarashada "Xarunta Nolosha Magaalada" (sababtu waa bandhigga Ales Pushkin, oo la sheegay inuu muujiyay sawir ku hoos dhacaya sharciga ka-hortagga xag-jirnimada.). Bishii Juun 18, waxaa la ogaaday in mas'uuliyiinta Brest ay ka tirtireen hay'adda dhaqan-bulsheed "Kryly Chalopa Tiyaatarka" iyo dhaqanka iyo waxbarashada "Grunt budushchego". Aasaasku waa hirgelinta waxqabadyada aan u dhigmin yoolalka iyo mawduuca ku xusan axdiga. Bishii Juun 30, mas'uuliyiintu waxay dalbadeen in la joojiyo howlaha ay Goethe-Institut iyo Adeegga Isdhaafsiga Tacliinta Jarmalka (DAAD) ee Belarus, ururada waaweyn ee daraasadda luqadda Jarmalka iyo dhaqanka adduunka oo dhan. (Laga soo bilaabo maalmaha ugu horeeya ee nuska labaad ee sanadka, waxaa la ogeysiiyey in Wakaaladda Horumarinta Gobolka Brest “Dzedzich”, oo qabtay xaflad dhaqameed iyo munaasabado kale oo dhaqameed, ayaa la faaruqiyey).
Qaab kale oo cadaadis loogu saaro ururada waa kormeero aan qorsheysneyn oo ka socda Wasaaradda Cadaaladda. Ururada bulshada waxay bilaabeen inay helaan waraaqo ku saabsan kormeerka u hogaansanaantooda shuruudaha sharciga Belarusiyaanka. Liistada dukumiintiyada la codsaday waxay galayaan daraasiin shey, waxay saameyn ku yeelanayaan qiyaastii 3-4 sano howlaha ururka, waraaqaha laftooda oo ay la socdaan ogeysiiska kormeerka socda waxay la imaanayaan dib u dhac hal usbuuc ah, taas oo ay ka dhalan karto maalmo kooban, haddii maalin maahan, waxaa u hartay aruurinta dukumiintiyada la codsaday. Waxaa la ogyahay in warqad noocan oo kale ah ay heshay "Belarusian PEN-Center" iyo "Guddiga Belarusiyaanka ee Golaha Caalamiga ah ee Taallooyinka iyo Goobaha (ICOMOS)". (Laga soo bilaabo maalmaha ugu horeeya ee nuska labaad ee sanadka, waxaa sidoo kale la ogsoon yahay in warqad noocan oo kale ah ay heleen "Batskaushchyna" iyo "Midowga Qorayaasha Belarusiya"). Laga soo bilaabo dhammaadkii Juun, waxaa la ogyahay in "Guddiga Belarusiyaanka ee ICOMOS", ka dib natiijooyinka hantidhawrka, ay warqad ka heleen Wasaaradda Caddaaladda iyada oo la soo saaray digniin ku socota hay'adda oo la xiriirta ku xadgudubka sharciga iyo baahida loo qabo in la qaado tilaabooyin dhowr ah oo lagu ciribtirayo xadgudubyada.
Ku noqoshada 2020, "dagaal ayaa lagu dhawaaqay" oo ku saabsan dadaallada ganacsiga ee ganacsiga ku dhisay qaybta qaran (astaamaha qaranka, xusuusta). Sidaa darteed, lixdii bilood ee la soo dhaafay, iyo gaar ahaan rubuca koowaad ee sanadka, dhammaan caqabadaha Belarus waxaa loo abuuray bakhaarro lagu iibiyo astaamaha iyo dharka qaranka: “Kniaź Vitaŭt”, Symbal.by, “Roskvit”, “Moj modny kut ”, Vokladki, БЧБ.bel,“ Admetnasts ”,“ Cudoŭnaja krama ”,“ Chameleon ”, LSTR Adzieńnie, workshop moj rodny kut, dharka dharka naqshadeeye Honar. Dukaammada iyo / ama milkiileyaasha waxaa kormeeray shaqaalaha dhammaan noocyada adeegyada: Wasaaradda Xaaladaha Degdegga ah, FDI, Waaxda La-dagaallanka Dambiyadaha Dhaqaalaha, Waaxda La-dagaallanka Dembiyada abaabulan, booliiska, OMON, Kormeeraha Ilaalinta Shaqaalaha. , Heerka Gobolka, iwm. Bishii Juun, bakhaarka "Admetnasts" waxaa sidoo kale booqday wakiilo ka socda waaxda fikirka ee guddiga fulinta magaalada oo leh sheegashooyin alaabooyin leh midabyo casaan iyo caddaan ah.
Dukaammada qaarkood iyo ururada waxaa lagu qasbay inay joojiyaan howlahooda qeyb ahaan ama gebi ahaanba:
Jeegag badan, maxkamadaha, ganaaxyo iyo qabashada alaabada awgeed, dukaanka Brest ee internetka "Kniaź Vitaŭt" waa la xiray.
Khadka tooska ah oo ka soo qaado dukaamada Symbal.by xiran yihiin. Dukaanka ayaa kaliya lagu iibiyaa alaabada dhijitaalka ah.
Dukaanka qadla'aanta ah "Moj modny kut" mar dambe ma leh dukaan jireed; taa badalkeedana hadda waxay u shaqeysaa si khaas ah dukaanka internetka ee The xiritaanka qasabka ah ee Budźma-krama ayaa lagu dhawaaqay.
Dukaanka Gomel "MROYA" ayaa ku dhawaaqay inuu dhow yahay xiritaanka (sababo dhaqaale awgood).
SU'AALO KU SAABSAN XASUUSTA TAARIIKHDA
Mawduuc gaar ah oo ku dhaca macnaha guud ee ku tumashada xuquuqda shaqaalaha dhaqanka iyo xuquuqda dhaqanka, laakiin ku fadhiya meel gooni ah marka laga hadlayo khudbadaha saraakiisha, ayaa ah aragtida ku aaddan mowduucyada lagu muransan yahay ee aagga xusuusta taariikhiga ah.
Hadalada wakiilada gobolka, fikradahaas waxaa loo taagay "kahortaga ammaanta naasiyiinta." Sidaa darteed, gobolka Mogilev, tusaale ahaan, koox shaqo ayaa loo abuuray inay baaraan kiis dambiyeed ku saabsan xasuuqii dadka Belarusiya intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka, iyo A. Dzermant, oo ah cilmi baare ka tirsan Machadka Falsafadda ee Akadeemiyadda Qaranka of Science of Belarus, waxay soo jeedineysaa ururinta, diiwaangelinta iyo soo bandhigida xaqiiqooyinka noocaas ah ee "lamaanayaasha" reer galbeedka. Akhrintii koowaad, ku-xigeennada baarlamaanka waxay meel mariyeen sharci ku saabsan ka hortagga dhaqan celinta naasiyiinta. Wasaaradda Dhaqanka ee Jamhuuriyadda Belarus, oo ay weheliyaan guddiyada fulinta ee gobolka Brest iyo Berezovsky, waxay qabteen ficillo loogu talagalay dhacdooyinka ka dhacay goobta xero-urursiga ee magaalada Bereza-Kartuzskaya (hadda waa Bereza, gobolka Brest), in kasta oo horaan maamulku muu muujin wax dan ah meeshan.
Xadgudubyada ku jira qaabdhismeedka mawduucan:
On 28 Febraayo, Iskuulka Isboortiga Bulshada ee Polish ee loogu magac daray Romuald Traugutt ayaa qabtay munaasabad loogu talagalay Maalinta Xuska "Askarta Diidmada" ee Brest. Masuuliyiintu waxay u arkeen tani inay tahay geesinimada Naasiyiinta. Dhacdadani waxay horseedday cadaadis ballaaran oo ku saabsan bulshada reer Poland, “Sababta Polish”, iyo guud ahaan siyaasada dhaqanka ka soo horjeedka Polishka. Natiijo ahaan, bishii Maarso hoggaanka Midowga Poles (oo aan laga aqoonsaneyn Belarus) waa la xiray, waxaana baaritaanno lagu sameeyay xarumaha ku yaal Hrodna, Brest, Baranavičy, Lida, iyo Vaŭkavysk. Cadaadiska xubnaha iyo dhaqdhaqaaqayaasha Midowga Poles iyo dadka laga tirada badan yahay ee Polishka ah ee ku baahsan Belarus wali wuu socdaa. Gudoomiyaha Midowga Poles, Andżelika Borys iyo xubin ka tirsan midowga, Andrzej Poczobut, ayaa xirnaa tan iyo bishii Maarso, waxaana lagu soo oogay dacwad. Agaasimaha LLC "Polish School" Anna Paniszewa, madaxa laanta Lida ee "Union of Poles" Irena Biernacka, iyo agaasimaha iskuulka dadweynaha ee "Union of Poles in Volkovysk" Maria Tiszkowska, ayaa sidoo kale la xiray isla dacwad ciqaabeed tan iyo bishii Maarso. Bishii Juun 2 waxaa la ogaaday in saddexda loo qaaday Poland. Andżelika Borys iyo Andrzej Poczobut ayaa diiday in la musaafuriyo. Dhammaantood waxaa loo aqoonsaday inay yihiin maxaabiis siyaasadeed.
Sidoo kale bishii Maarso, iyadoo lagu hanjabayo kiis dambiyeed ka dhan ah jilayaasha, riwaayaddii "Kaddish" waa la joojiyay (sidoo kale waxaa la rabay inay ka dhacdo Xarunta Nolosha Magaalada ee Grodno; mawduuca ruwaayaddu wuxuu ahaa Holocaust).
Daabacaad sumcad-dilid ah ayaa laga duubay abaalmarinta Suugaanta Natallia Arsennieva iyo qoraaga Natallia Arsennieva-Kushel nafteeda, halka loogu yeero "iskaashi" oo u sujuuday calanka cad-casaan-cad; sida la sheegay qoraalo ka soo horjeedda Yuhuudda oo laga soo qabtay shaqadii iyada ayaa loo aaneynayaa iyada. (Xusuusin: Natalya Arsenyeva-Kushel - qoraa heesta "Mahutny Boža" ee la qoray 1943, ayaa lagula xisaabtamayaa waxqabadkeeda maanta).
Faaf-reebka iyo Xorriyadda Hal-abuurka ah
Dacwad ciqaabeedka fanaanka Ales Pushkin ayaa socota, qorayaasha, buugaagta, guryaha daabacaadda, bandhigyo, bandhigyo, riwaayadaha, heesta "Mahutny Boža" iyo hay'ado kale oo dhaqameed ayaa faaf reeb lagu sameeyay.
Fanaaniinta iyo masraxa fanka ayaa loo diiday shahaadooyinka socdaalka: Kasta, J: Morse, RSP, iwm., SHT ma helin rukhsad ay ku ciyaaraan "Wiilka Hore" iyada oo ku saleysan sheeko ay qortay Saša Filipienka [Sasha Filipenko], iyo "Che Theater" ma heli karaan madal ay ku ciyaaraan halyeeyadooda ciyaaro "Dziady".
The Bandhigga Maxim Sarychau "Waxaan maqli karaa shimbiraha", oo loogu talagalay Maly Trostenets (Little Trostenets), oo ah xerada ugu weyn ee dhimashada Nazi, waxay socotay wax ka yar saacad.
Maalinta ku xigta furitaanka ka dib, bandhigga “Mashiinka wuu neefsadaa, laakiin ma idhi”, oo loogu talagalay dhakhaatiirta Belarusiyaanka iyo caqabadihii ay la kulmeen intii lagu jiray sanadka safka, ayaa la joojiyay. (Xusuusin: bandhiggu wuxuu ka dhacay goobta munaasabadda Miesca).
Laba maalmood ka hor jadwalka, weyn bandhiga kooxda farshaxanka “Pahonia”oo ay ku jiraan shaqada “Aqua / areli +” by Ales Marachkin, waa la xiray (laba ka mid ah sawir gacmeedka waxaa loo hibeeyay Nina Bahinskaja [Nina Baginskaya] iyo Raman Bandarenka [Roman Bondarenko] - shakhsiyaadka astaanta u ah dhaqdhaqaaqa mudaaharaadka ee Belarus).
Sharaxaad la'aan, Bandhigga sawirka Viktar Barysienkaŭ “Waxaa la joogaa waqtigii la xasuusan lahaa”, ma uusan ka dhicin madxafka gobolka ee Vitebsk. ("Waxay umuuqataa in qof uu ku arkay waxyeello fikradeed sawirrada kaniisadihii burburay"). Dhowr maalmood ka hor, ayaa sidoo kale la joojiyay muxaadaro uu taariikhyahan maxalli ah ku qaban lahaa maktabadda gobolka.
Sababo ka baxsan awgood Siarhiej Tarasaŭxakameyntiisa, soo bandhigidiisa buugga “Eufrasinnya - Ofrasinnya - Aufrasinnya. Waqtigeedii, iskutallaabteedii ”dib ayey u dhacday.
From Bandhigga Nadzia Buka [Nadia Buka] Asabistaja sprava ”(Ganacsi shaqsiyeed) Grodno, oo ka mid ah 56 shiraac, 6 si lama filaan ah ayaa loo waayey - sida ay noqotay, kuwani waa kuwa leh isku dhaf cad oo cadaan iyo casaan ah (waa wax iska caadi ah in qaarkood la rinjiyeeyay kahor 2020).
Iyagoo ka baqaya in la dhibaateeyo qorayaasha, kooxda filimka dokumenteriga ah ee 'WATCH DOCS Belarus' ayaa dib u dhigtay xafladdooda internetka si aan xad lahayn. Riwaayaddii "Bakayle Caddaan, bakayle cas" ee tiyaatarka HomoСosmos ayaa la joojiyay dhowr iyo toban jeer oo horeba. Afkaarta dugsiga waxay hubiyaan in ardayda la geeyo matxafyada gobolka, oo aan loo dhigin kuwa gaarka loo leeyahay. Baarka Hrodna, menu-ka waa la faafreebay (waxay dalbadeen in wajiyada iyo magacyada lagu dhajiyo), taas oo lagu daabacay sawirrada Belarusiyaanka caanka ah. RTBD waxay ka saartey riwaayaddeeda "Codadka Chernobyl" (oo ku saleysan shaqada abaalmarinta Nobel Sviatlana Aleksijevič). Sviatlana Aleksijevič maanta waxay u badan tahay inay tahay mid ka mid ah qorayaasha ugu faafreebka badan: magaceeda waxaa laga tirtiray daboolka joornaalka, looma ogolaan jirin in lagu xuso fasalada suugaanta iskuulka, warbaahinta dowladana waxay si isdaba joog ah u bahdishay sharafteeda iyo sumcadeeda ganacsi.
SIYAASADA DHAQANKA DADWEYNAHA IYO MAALIYADDA
Waxaan horey u soo sheegnay tusaalooyinka xadgudubyada mid kasta oo ka mid ah saddexda koox ee xuquuqda: xuquuqda madaniga iyo tan siyaasadeed (cadaadis loogu jiro diidmada, xarig aan loo aabo yeelin, shuruudaha lagu hayo hay'adaha xiran, hadalada sumcad xumada, iyo kuwa kale); xuquuqda dhaqanka (faafreebka, xorriyadda abuurka, xuquuqda isticmaalka astaamaha) iyo xuquuqda dhaqan-dhaqaale (joojinta qasabka ah ee howlaha, la wareegidda hantida, abuurista carqalado maamul oo ku yimaada hirgelinta howlaha iyo daadinta oo ah qaabkeeda ba'an).
Nooc kale oo xadgudub ah oo ka mid ah xuquuqaha dhaqan-dhaqaale waa xaddidan iyo xulashada dabeecadda ee taageerada dawladda, taas oo jilayaasha dhaqanka ee aan dawliga ahayn gebi ahaanba laga saaray nidaamkan. Si ka duwan hay'adaha dhaqanka ee ay maamusho dowladdu, jilayaasha dhaqanka ee aan dowliga ahayn ma helaan kaalmo-dhaqaaleed ama daaweyn la doorbido. Sidaas,
Dhamaadkii bishii Maarso, Golaha Wasiiradu waxay soo saareen qaraar liiskooda wax laga badalay ururada bulshada, ururada shaqaalaha iyo ururada, iyo aasaaska kaas oo loo dejiyay dhimis 0.1 ah sicirka kirada ee aasaasiga ah. Si kastaba ha noqotee, laga soo bilaabo bishii Abriil ee qiimaha kirada guryaha ayaa kordhay 10 jeer oo loogu talagalay 93 urur, kuwaas oo badankood aysan ogeyn sidaas darteedna aysan u helin waqti ay horay ugu sii diyaar garoobaan. Waxaa ka mid ah ururada dadweynaha ee liiska ku jira kuwa waxqabadyadooda ay si toos ah u saameynayaan dhinacyada dhaqanka ee dalka: "Ururka Maktabadda Belarusiya", "Midowga Belarusiyaanka Naqshadayaasha", "Belarusian Union of Composers", "Belarusian Union of Artists", "Belarusian Cultural" Sanduuqa "," Belarusian Association of Clubs "UNESCO", iyo "Belarus Dance Sport Alliance".
Matxafyada gaarka loo leeyahay waxay la kulmayaan dhibaatooyin- haddii matxafyada gobolka ay dowladu kabto, markaa kuwa gaarka ahi taageero la'aan waxayna qarka u saaran yihiin badbaadin. Sidaa darteed, guddi gaar ah oo ka tirsan guddiga fulinta ee magaalada ayaa ka xayuubiyay Grodno "Matxafka Tsikavy" qiimo jaban isbarbar dhiga kirada, sidaas darteed biilasha ayaa kordhay 6 jeer. Bartamihii bishii Abriil, waxaa la ogaaday in matxafku xirmay. Kirada Madxafka Nolosha Magaalooyinka iyo Taariikhda Hrodna sidoo kale waa la kordhiyay. Haatan, milkiiluhu wuxuu daboolayaa kharashka isaga oo iska bixinaya si loo ilaaliyo matxafka. Matxafyada qaab dhismeedka qaab dhismeedka - Grodno Mini iyo Minsk "Strana mini" - sidoo kale waxay la kulmayaan dhibaatooyin waxayna qarka u saaran yihiin badbaadin.
mid ka mid ah ururada ugu da'da weyn dalka ayaa la kulmay dhibaatooyin dhaqaale - "Frantsishak Skaryna Belarusian Society Society". Sanadkii 2020, bulshadu waxay ku guuleysatay inay bixiso kirada dhismayaasha kaliya mahadaas awgeed;
guriga kaliya ee daabacaada ee Belarus ku takhasusay soo saarista taariikhda maxalliga ah iyo suugaanta xusuusta "Riftur" iyo ilaha taariikhda deegaanka ee meeraha planetabelarus. ayaa si dirqi ah u badbaadaya;
dadka deegaanka ayaa la dagaalamaya xiritaanka maktabada tuulada Lielikava ee gobolka Kobryn; maktabaddu waxay ahayd meesha kaliya ee dhaqan ahaan ugu hartay miyiga.
Xuquuqdaan sidoo kale waxay ka tirsan tahay kooxda xuquuqda dhaqan-dhaqaale waxaana lagu soo daray 10ka xuquuq ee ugu badan ee lagu xadgudbo inta lagu gudajiray qeybtii hore ee 2021.
Ku dhowaad xaalad kasta oo shaqo ka eryid ah oo lagu duubay kormeerkeena, ku tumashada xuquuqda shaqada waxay la xiriirtaa cadaadis ku saabsan diidmada iyo ku xadgudubka xuquuqda xorriyadda hadalka. Waxay ahayd labadan qaybood ee horseeday xaqiiqda ah in shaqsiyaad dhaqameedyo, oo hore loogu arki jiray xilalka madaniga ah ee firfircoon, ama shaqada laga eryay ama loo abuuray shuruudo ku riixaya inay is casilaan.
Shaqaalaha waa la ceyriyay / lama cusboonaysiin:
tiyaatarada: Tiyaatarka Riwaayadaha ee Mogilev, Masraxa Riwaayadaha Gobolka Grodno, Tiyaatarka Tacliinta Qaranka ee loogu magac daray Yanka Kupala, Tiyaatarka Bolshoi ee Belarus, Masraxa Tiyaatarka Tiyaatarka Qaranka ee loogu magac daray Maxim Gorky;
matxafyada: Matxafka Taariikhda Mogilev, Matxafka Novogrudok ee Taariikhda iyo Lore Maxalliga ah, Guriga-Matxafka Adam Mitskevich ee Novogrudok, Matxafka Belarusiya Polesie, Matxafka Gobolka ee Taariikhda Suugaanta Belarusiyaanka iyo kuwo kale;
goobaha waxbarashada: Akadeemiyada Fanka ee Belarusiya, Grodno State College of Music, Yanka Kupala State University of Grodno, Polotsk State University, Mogilev State University, Minsk State Linguistic University iyo meelo kale.
Takoorid ku saabsan luqadda reer Beelluusiya
Waxaa jiray 33 xaaladood oo takoorid ah oo salka ku haysa luqadda. Badidooda badankood waxay ku saabsan yihiin luqadda Belarusiyaanka (booska labaad waa Polish). Xaaladaha waxay khuseeyaan shakhsiyaadka iyo ururada labadaba iyo waliba takoorka luuqadeed ee heer qaran.
Sidaa darteed, waxaan soo uruurinnay kiisaska soo socda
65-sano jir hawlgab ah Adam Shpakovsky ayaa lagu xiray Minsk, deriska ayaa ka cawday asaga oo "ka careysiiyay qof walba luqadiisa Belarusian."
Bishii Juun 14, Yulia waxay la tashatay dhakhtar ka socda Minsk District Polyclinic No. 19. Markii ay salaamaysay, waxay ku hadashay Belarusian. Jawaabta, dhaqtarka wuxuu bilaabay inuu kor uqaado codkiisa wuxuuna usheegay Julia inay kuhadasho “luuqad caadi ah.”
Meelaha lagu hayo:
13-kii Maajo, Zmitser Dashkevich, ka dib markii uu soo xiray xarig maamul oo ka dhacay xarunta xabsiga kumeel gaarka ah ee Zhodina, wuxuu ku qoray borotokoolka Belarusiya inuu si buuxda u helay waxyaabihii lala wareegay oo uusan sheegan. Sarkaalka xabsiga ayaa u sheegay Dashkevich inuu ku qoro hab maamuuska af Ruushka. Zmitser wuu diiday, taas oo dharbaaxo kaga dhacday garbaha.
Valadar Tsurpanau waxaa lagu riday qol ciqaab ah seddex maalmood markii labaad sababtoo ah wuxuu ku hadlaa Belarusian.
Illa Malinoŭski wuxuu yiri intii lagu jiray xarigiisa iyo waqtiga uu ku sugnaa Waaxda Arimaha Gudaha ee Pinsk (Waaxda Arimaha Gudaha ee Degmada) Abriil 22, wuxuu maqlay hadalo jees jees ah, aflagaado iyo dalabyo ah inuu kula hadlo Ruushka.
Dhowr soo saareyaal ayaa diidaya inay u adeegsadaan luuqadda Belarusiyaanka baakadaha iyo sumadaha alaabtooda.
Shirkado badan ayaan haysan nooca luqadda Belarusiyaanka ee degelladooda.
Mas'uuliyiintu waxay sameynayaan wax kasta oo suurtagal ah oo aan ruqsad loo siin karin howlaha waxbarasho ee Jaamacadda Nil Hilevič, oo ah jaamacad ku hadasha luqadda Belarusiyaanka, oo ay abuurtay Bulshada Luqadda Belarusiyaanka ee 2018.
Fasallada ku hadla Belarusiyaanka sidoo kale lama taageerin. Tusaale ahaan, tuulada Amielaniec, degmada Kamianiecki, gobolka Brest, iskuul miyi ah oo wax lagu barto Belarusiya ayaa la xirayaa. Sida ay masuuliyiintu sheegeen waxaa loo xirayaa sababo la xiriira shuruudihii loo baahnaa iyo ardayda oo aad u tiro yar.
Dhibaatooyinka furitaanka fasal ku hadla Belarusiyaanka sababo la xiriira caqabado ay dejisay waaxda waxbarashada. Dugsiga guud ee waxbarashadu wuu diidi karaa inuu ku bixiyo wax ku barashada afka Belarusiyaanka.
Gobollada Belarus, barashada luqadda Belarusiyadu waxay hoos ugu dhacday heerarka barashada af qalaad.
Dhibaato weyn ayaa ka jirta la'aanta dhakhaatiirta hadalka ee ku hadasha Belarusiyaanka, iyo sidoo kale suugaanta cilladaysan ee Belarusiyaanka.
XUQUUQDA KALE EE DHAQANKA
Marka lagu daro kiisaska ciqaabta gaadiidka, kaydinta ama akhrinta buugaagta lagu xusay qaybta "Suugaanta", iyo sidoo kale xaqiiqooyinka aragtida midab kala sooca ee luqada Belarusiyaanka, kiisaska kale ee ku xadgudubka xuquuqda dhaqanka ee Belarusiyaanka ayaa la duubay. Khaas ahaan:
Abuuritaanka caqabadaha ku dhaqanka jimicsiga xuquuqda isticmaalka alaab dhaqameed: si sharci darro ah loogu hayo ardayda koorsooyinka luqadda Belarusiyaanka ee Vaŭkavysk; galbinta dalxiisyada ama xarigga dalxiisayaasha dalxiiska ee Polack, Navahrudak, Minsk; xarig iyo maxkamadeyn ka dhan ah daawadayaasha bandhig faneed ka dhacay Smaliavičy; xariga sharci darrada ah iyo xukunka 24 saacadood oo xarig maamul ah oo loogu talagalay daawadayaasha ciyaarta "Bakayle Caddaan, bakayle cas".
Xadgudubyada la xiriira u hoggaansamida sharciga ku saabsan Ilaalinta Hiddaha Taariikhda iyo Dhaqanka.
Dhinaca kale, kiisas badan ayaa laga diiwaangeliyey meel ka baxsan kormeerka ugu weyn:
Ujeedo xumida shaqsiyaadka dhaqanka u leh warbaahinta dowladda.
La dagaallama astaamaha (tirtiridda calaamadaha caddaan-casaan-cad) iyo tallaabooyinka midnimada ee dhaqdhaqaaqa dibadbaxa.
Maareynta hoose ee siyaasada gobolka ee dhanka dhaqanka: cabirka miisaaniyada ciidaha, ballamaha cusub, dacaayadaha, qasab ku qorida wargeysyada iyo kuwa kale.
LUMIS DHAQAN OO KALE
Dukaamada buugaagta carruurta ee waddanka oo dhan ayaa lagu qasbay in la xiro ama ay ku jiraan xaalado dhaqaale oo aad u adag.
Iyadoo ay weheliso ka bixitaankii khasabka ahaa ee waddanka si loo hubiyo nabadgelyada shaqsiga, dadka hal-abuurka ah ayaa sidoo kale ka tagaya dalka iyagoo raadinaya is-aqoonsi. Bilowgii 2021, jilayaashii masraxa Hrodna ee shaqadooda waayey waxay u amba baxeen Lithuania. Bishii Luulyo 9, waxqabadkoodii ugu horreeyay wuxuu ka dhacay Vilnius. Masraxa farshaxanka casriga ah ayaa lagu qasbay inuu ka haajiro Belarus wuxuuna dib u bilaabay shaqadiisa Kyiv. Bishii Meey 20keedii, halkaas ayey ahayd markii ugu horreysay ee ruwaayaddu ku saleysneyd sheeko ay qortay Saša Filipienka [Sasha Filipenko] “Wiilka Hore”. Ugu yaraan sanadka soo socda, muusigga muusiga iyo halabuurka Jahor Zabielaŭ [Yegor Zabelov] wuxuu u haajiray Poland. Taariikhyahan, musharax taariikhda farshaxanka, iyo bare Jaŭhien Malikaŭ, oo laga ceyriyay jaamacada, waxay aadeen Poland hal sano oo tababar ah. Kiisas badan oo noocaan ah ayaa la arkay ..
Way adag tahay in fanka loo adeego markii “dalku uusan waqti u haynin sharciyo”, markii dhammaan xeerarka - sharci iyo bini-aadam - ba lagu xadgudbay.